အချစ်ပုံပြင်များ | mysexnotes
Archive | အချစ်ပုံပြင်များ RSS feed for this section
မေဧကရီ ၏ ချစ်မောင်လေး နှင်. ပထမည
မေဧကရီ မှာ ယောင်္ကျား ရှိပေမဲ. သူ.ယောင်္ကျား ကိုဇော်ထွန်း က နယ်တွင် အလုပ်လုပ်နေတာမို.
၂ လတခါ လောက်သာ တွေ.ရပြီး သူ ကတော. ရန်ကုန် မှာပင် စတိုးဆိုင်ဖွင်.ကာဆိုင်မှာပင် အသက်
၁၅နှစ်ခန်. အိမ် ဖေါ်မလေး သက်စု နှင်. နေတာဖြစ်သည်၊ သူ. စတိုးဆိုင်တွင်အောင်အောင် ဆိုသည်. ၁၈
နှစ်အရွယ် အရောင်းကောင်လေး တယောက်နှင်. ရွယ်တူ အရောင်းစာရေးမလေး ကေကေ နှင်. အိမွန် တို.
အလုပ် လုပ်ကြပြီး ည ၁၀ နာရီခန်.အထိဖွင်.ကာ ၀န်ထမ်းများကို ဆိုင်ပိတ်ပြီးလျှင် ကားဖြင်. သူကိုယ်တိုင်
လိုက်ပို. ပေးတာမို. အဆင်ပြေလှသည်။
တနေ. နေ.လည်ဖက် လူရှင်းတုန်း မေဧကရီ လည်း ခုံပုလေးဖြင်. စင်အပေါ်ဆုံးမှ မုန်.ပုံးကို
လှမ်းယူနေတုန်း သူ.အနောက်နားရောက်နေသည်. အောင်အောင် မှာ မေဧကရီ မို.မောက်သောရင်အစုံ
သေးသွယ်သောခါးလေး နှင်. လိုက်ဖက်လှသော ကားစွင်.လုံးဝိုင်းပြီး ကောက်နေသည်.ဖင်ကြီးအား
သိမ်းကြုံးကြည်.ကာ လီးပင် တောင်လာကာ စိတ်ထဲမှ ပြစ်မှားနေတုန်း မေဧကရီ ခုံပေါ်မှ ခြေချော်ကျကာ
အောင်အောင် ကလည်း အနားရှိနေတာမို. ဖမ်းထိမ်းလိုက်ရာ မေဧကရီ မှာအောင်အောင် ကိုယ်ပေါ်ကျောမှီ
ကျကာ အောင်အောင် လည်း ရုတ်တရက်လှမ်းပွေ.လိုက်ရာလက်တဖက်က မေဧကရီ၏ ကားစွင်.သည်.
ဖင်ကြားထဲ နှိုက်မိသလိုဖြစ်သွားပြီး နောက်တဖက်ကခါးသိမ်လေး ကိုဖက်မိသွားတာမို. လူပျိုရိုင်းလေး
အောင်အောင်မှာ သွေးဆူကာ လီးကြီး ထောင်မတ်လာပြီး မေဧကရီ၏ ဖင်သား အိအိကြီး ကို သွားထောက်
မိသွားပါသည်။ Continue reading →
ထိုအသံကိုကြားလိုက်ရသော ခိုင်ကြူသင်းတစ်ယောက် ရင်သိမ့်တုန်သွား သည်။
လှမ်းလက်စခြေလှမ်းတို့လည်း ရပ်သွားသည်။ အသံတွေကတော့ဆက်ကြားနေရဆဲ။
အဟင့်ဟင့်..ဟင့်.. အသက်ပြင်းပြင်းရှူသံများကို ကြားရသည်။ လုံချည်၊ဒါမှမဟုတ် ထမီဖြန့်
၀တ်လိုက်သည့်အသံလိုလိုလည်း ပေါ်ထွက်လာသည်။ တွေ.ပြီဆို..ဒါပဲစိတ်ကူးနေတာပဲ။
အို.အမေ့..လက်ကြီးကလဲ..ဟာ..မကိုင်နဲ. ဆို ..ဒါကြောင့်သူနဲ့ လာမတွေ့ ချင်တာ..သိလား။
ထို့ နောက် လှုပ်ရှားသံများလိုလို ကြားရပြန်သည်။
အမျိုးသမီး၏ငြင်းပယ်သံသည် တကယ်တော့ခရာသံဖြစ်နေသည်။ ခပ်အစ်
ခိုင်ကြူသင်းသည် အသက်(၁၂)နှစ်ကျော်သာရှိသေးသောအပျိုပေါက်ကလေး ဖြစ်သည်။
ကရင်နှင့်ပန်ချာပီကပြားမလေးမို. အရပ်မြင့်ကာ ကိုယ်လုံးကလည်း ဖွံ. ထွားနေပြီ။
အရွယ်နှင့်စာလျှင် အတော်လေးဆူဖြိုးတောင့်တင်းသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
ကလေးတစ်ယောက်၏ကိုယ်နေဟန် သွင်ပြင်ကတော့ လုံးလုံးမပျောက်သေး။ စွဲမက်
စရာအပျိုပေါက်မလေးဟု ပြောရပေမည်။ ယခုညနေပိုင်း ရုပ်ပြစာအုပ်ဖတ်ချင်သော ကြောင့်
သူမနေထိုင်ရာအိမ်ခြံဝင်းကြီးနှင့်ကပ်လျှက် လမ်းသွယ်လေးတစ်ခုထဲရှိ ကိုစိုး
ပုံမှန်ဖွင့်ချိန်က ညနေ(၅)နာရီမှည(၉)နာရီအထိ။ ယခု(၄)နာရီကျော်ကျော်သာရှိသေးရာ
စောတော့စောသေးသည်။ သို့သော်ခိုင်ကြူသင်းက ကိုစိုးနောင်ထံတွင်စာအုပ်ငှားနေကျ
ဖေါက်သည်ဖြစ်ကာ လူချင်းလည်းအတန်အသင့်ခင်မင်နေသည်မို့ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မဟုတ်
မလှမ်းမကမ်းသို.အရောက်တွင် ဆိုင် ခန်းထဲမှအသံပလံများကို အပျိုပေါက်လေး
ခိုင်ကြူသင်းကြားရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအသံ တို့သည်ခိုင်ကြူသင်းကို အကြီးအကျယ်
ရင်ဖိုလှုပ်ရှားစေသည်။ လှမ်းနေသောခြေလှမ်း တွေတုံ့ရပ်ကာ
လူကကျောက်ရုပ်ထုတစ်ခုလိုငြိမ်နေသော်လည်း အပျိုပေါက်လေး၏ Continue reading →
နှစ် ကျော်ကျော်ရှိပြီပေါ့၊ ကျွန်တော့်ညီမလေးကသင်းသင်းတဲ့၊
အစ်ကို နဲ့ညီမ(၄)လပဲ အသက်ကွာတယ်ဆိုပြီး
အံ့သြနေကြလား၊ အမန်ှက သင်းသင်းနဲ့ကျန်ွတော်ဟာ
လင်ကပါတ့သဲားနဲ့ မိန်းမကပါတ့သဲ မီးပေါ့၊ ရှင်းအောင်
ပြောရရင် ကျွန်တော့်အဖေ ဦးအောင်ြမင့်နဲ့သင်းသင်း အမေ
ဒေါ်ထားထားတို့ဟာ လန်ွခ့တဲ့ဲ(၄)နစ်ှက အိမေ် ထာင်သစ်
ထူထောင်ကြတာမို့ လင်ပါ သားကျန်ွတော်နဲ့ မယားပါသမီး
သင်းသင်းတို့ဟာ အိမ်တစ်အိမ်ထဲမှာ မောင်နှမတွေအဖြစ်နဲ့
ကြီးပြင်းခ့ရဲ တာပါ။ အဖေန့လဲ က်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း
ဒေါ်ထားထားတို့ သားအမိ ဒဂုံမြို့သစ်က ကျွန်တော်တို့
အိမ်ကိုပြောင်းလာတော့ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပဲရှိတာမို့ အဖေတို့
လင်မယားကတစ်ခန်း၊ ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမက တစ်ခန်း
အိပ်ကြရတာပေါ့၊ ဒီလို နေလာကြရာက ကျွန်တော့် အသက်
(၁၅)နစ်ှကျော်ကျော် (ဂ)တန်း ရောက်တ့နှဲစ်မှာ
ပြဿနာစတက်တော့တာပါပဲ။ ပြဿနာကိုစပြီး မီးမွှေးတာက
ဒေါ်ထားထားပေါ့၊ ဒေါ်ထား ထားကအသက်(၃၂)
နှစ်လောက်ရှိပေမယ့် ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက်က အတော်
လှတယ်၊ ရင်ထွားထွားတင်ကားကားနဲ့ မြင်တဲ့လူတိုင်း
စိတ်နြဲ့ပစ်မှားချင်စရာ ပုံစံမျိုးလေ၊ ဖေဖေက ပိန်ကပ်ကပ်
မဲချောက်ချောက်ဆိုတော့ ရှေ့သွားနောက်လိုက် မညီကြဘူး
ပေါ့၊ ဖေဖေန့ညဲားကာစကတော့ ဒေါ်ထားထားဟာ
အတော်လေးခြေငြိမ်ပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်ကျမှ ဗွေဖေါက်
လာတာဗျ။ ဖေဖေက စာရင်းစစ်ဆိုတော့ တစ်လမှာ တစ်ပတ်
လောက် နယ်ကိုစာရင်းစစ်ထွက်ရတယ်။ ဖေဖေ စာရင်းစစ်
ထွက်သွားရင် ဒေါ်ထားထားကတစ်ခန်း၊ ကျွန်တော်တို့ မောင်
နှမက တစ်ခန်းအိပ်ကျရတာပေါ့၊ အဒဲီပြဿနာတက်တဲ့
ညက ညဘက်၁၂နာရီကျော်လောက်မှာ ဟိုဘက်ခန်းက
အသံသဲ့သဲ့ကြားလို့ သူခိုးများကပ်တာလားလို့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့
အိပ်ယာကအသာထပြီး ကြည့်လိုက်တော့ အသံက ဒေါ်ထားထားရဲ့
စမ်းပါ၊ မထား ဘယ်မှထွက်မပြေးပါဘူး။ မောင်ကြမ်းနေတာ
နဲ့အသေံ တွအရမ်းထက်ွပြီး ခလေးတေနွိုးကုန်ပါ့မယ်။”
“အင်းပါမမရဲ့၊ ဒီမှာငတ်ပြတ်နေတာလေး အားရအောင်
လိုးပါ ရစေအုံး၊ ဒါပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းပဲလိုးမှာပါ၊” “ဟင်းနော်၊
သိပ်အဖြစ်သည်းမနေနဲ့၊ အိုး ကြည့်ပါလား၊ ပြောရင်းဆိုရင်း
နားထဲမှာ သဲသဲကွဲကွဲ ကြားနေရတာမို့ စပ်စုချင်ဇောနဲ့ ချောင်း
ချောင်း လိုက်တော့-““ဟာ၊ကိုဇော်။” ပါးစပ်က အသံ
လွှတ်ကနဲ ထွက်သွားတာမို့ ကိုယ့်ပါးစပ်ကိုယ် ပြန်ပိတ်
ထားလိုက်မိတယ်။ ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ၊ အိမ်ကို ရေလာလာ
ထ့ေဲ ပးနေတဲ့ကိုဇော်ပေါ့၊ ကုတင်ပေါ်မှာ အန်တီထားနဲ့
ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတယ်၊ နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်တုံး
လုံးနဲ့ ကိုဇော်ကအပေါ်ကနေ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ဖဖိချနေတယ်။
ငါးတိုင်အားမီးလုံးအရောင်နဲ့ ဆိုပေမယ့် မြင်ကွင်းက Continue reading →
စူဇီ အတော်အပေးကောင်းသည်။ စူဇီ၏ အခံကောင်းမှုကြောင့် ဒေါက်တာ မင်းဒင်လည်း သုတ်လွှက်ချင်လာပြီ။
ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးမပြီးသေးသဖြင့် အသာအောင့်၍ သုတ်ကိုထိန်းရင်း ဆက်ဆောင့်နေသည်။
ရေအိမ်အတွင်းမှ နန်းမူသည်လည်း စူဇီအလိုးခံပုံကို သဘောကျရင်း သူမ၏ ဆောက်ဖုတ်ကလေးထဲသို့
လက်နှိုက်ကာ စူဇီလုပ်သလို ကော့လိုက် ကားမြှောက်လိုက် လုပ်နေ တော့သည်။
“ အိုး … လိုးစမ်းပါရှင်… နန်းမူကို နာနာလေး ဖိလိုးပေးစမ်း… ”
တစ်ယောက်တည်းပါးစပ်မှလည်း ယောင်ယမ်း၍ အသံမြှင့်မြှင့် အစ်အစ်ကလေး ပြောမိသည်။
နန်းမူလည်းအရမ်းခံချင်နေသည်။ ခံချင်စိတ်တွေတအားဖြစ်နေမိပြီ။ စူဇီခံတာကို သိပ်အားကျနေမိသည်။
နန်းမူတစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေအိမ်အတွင်းမှာ ဖီလင်တွေ တက်ပြီး မာစတာဗေးရှင်းခေါ်
တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဆန္ဒ ဖြေဖျောက်နေ၏။ ပါးစပ်မှလည်း တအင်းအင်း ညီးငြူမိ၏။
ဒေါက်တာမင်းဒင် တစ်ယောက်မှာလည်း ဂျပန်မလေးစူဇီကို လိုးရင်းလိုးရင်း ကောင်းသထက် ကောင်းလာကာ
ကောင်မလေး၏ မို့ဖောင်းသောနို့အုံဖွေးဖွေးနှစ်လုံးကို လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် ဘယ်ညာဆုတ်ကိုင်ပြီး နှုတ်ခမ်းခြင်းကပ်ကာ
တပြွတ်ပြွတ်စုတ်ရင်း ဆောင့်ပြီးရင်း ဆောင့်ထည့်နေတော့သည်။
ခဏအကြာ စူဇီသည်လည်း အရသာထူးကိုတွေ့၍ စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းထဲမှ ဒေါက်တာ၏ လချောင်းပွပွကြီးကို
ပွစိပွစိဖြင့် ညှစ်ပေးရင်း အရည်များရွှဲဆိုထွက်လာကာ အပြင်သို့ တဖွှီးဖွှီး ပန်းထွက်၍ ကာမအရသာ၏
အထွတ်အထိပ်ပန်းတိုင်သို့ တက်လှမ်း ရောက်ရှိသွားပါတော့သည်။
စူဇီ၏ အကြောအချဉ်များ ဆုတ်ဆိုင်းသွားမတတ် ဖြိုးဖြိုးဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်လို့သွားရကာ
ခြေချောင်းလက်ချောင်းကလေးများပင် တုတ်ကွေးသွားမတတ် အရသာကို အစွမ်းကုန်ခံစား ရရှိ လိုက်ရပြီး
အပေါ်မှ လိုးဆောင့်ထည့်သွင်းနေရသော ဒေါက်တာမင်းဒင်သည်လည်း တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားရပြီး လီးအရင်းမှ
တဆစ်ဆစ်ကကျင်တက်လာ၍ တစ်ကိုယ်လုံး အကြောဆွဲသလို ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်သွားကာ
စူဇီ၏ဆောက်ပတ်အတွင်းသို့ လီးကြီးကိုအရင်းသို့ထိုးသွင်း၍ ဆီးစပ်ခြင်းထိကပ်ကာ သုတ်ရည်များကို တဗြစ်ဗြစ်
နှစ်ဦးစလုံး အပြီးခြင်းဆုံသွားသဖြင့် ဒေါက်တာမင်းဒင်သည် ဂျပန်မလေး၏ ကိုယ်ခန္တာပေါ်တွင်
မှောက်လျက်ထပ်ကာ ဝက်မှိန်းမှိန်းနေတော့သည်။ နှုတ်ခမ်းချင်းအပြန် အလှန် တေ့စုတ်နေကြပြီး လီးကြီးကိုမူ
ရေအိမ်အတွင်းမှ နန်းမူသည်လည်း ရင်မောသွားရလောက်အောင် သူတို့နှစ်ယောက် လိုးနေကြပုံကို
တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း လှိုက်၍မောလာ၏။ သူမ၏စောက်ဖုတ်အတွင်းမှ သုတ်ရည်များ တဘွတ်ဘွတ် ရွှဲစိုကာ
ထွက်လာသည်။ နန်းမူသည် အလိုးခံချင်စိတ်များ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ စိတ်ကိုမနည်း ထိမ်းချုပ်၍
ရေအိမ်အတွင်းမှ ထွက်လာ ခဲ့လေသည်။
“စူဇီ … ” “ ရှင်ဒေါက်တာ … ” “ ကောင်းလားဟင် ”
“ အို… ဒေါက်တာကလဲကွယ် ”
အတော်ကြာသူတို့နှစ်ယောက် လီးနှင့်ဆောက်ပတ် ထပ်လျက်သား မချွတ်ပဲတန်းလန်း ကြီးဇိမ်ယူ မှိန်းနေကြရာမှ
ဒေါက်တာမင်းဒင်က စူဇီ၏ပါးပြင်ကလေးကိုရွှတ်ကနဲနမ်း၍ သူမ ကိုယ်ပေါ်မှ လိမ့်ဆင်းလိုက်သည်။ လီးကြီးမှာလည်း
ဖွတ်ဟုမြည်ကာ စူဇီ၏စောက်ဖုတ် အတွင်းမှ ကျွတ်ထွက်သွားတော့သည်။
စူဇီသည် ကုတင်ပေါ်တွင် ကျုံ့ကျုံ့လေးထိုင်နေပြီး ဒေါက်တာမင်းဒင်လိုးပြီးသော အရည်များ ချွှဲကျိပေကျံနေသော
ပျော့ခွေခွေလီးကြီးကို လက်ချောင်းလေးများဖြင့် အသာအယာ ဆုပ်ကိုင်ရင်း…
“ ယူ့…လီးကြီးက … ပျော့ခွေနေတော့လဲ… အကြီးကြီးပဲနော် ”
ဒေါက်တာမင်းဒင်သည် ဂျပန်ပျိုဖြူချောအလှကို အားရအောင် လိုးလိုက်ရသဖြင့် စိတ်ထဲတွင် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်လျက်
“ စူဇီယောက်ျm;လောက် မကြီးသေးပါဘူးစူဇီရယ် ”
“ သူ့ဟာကြီးကကြီးလွန်းလို့ စူဇီနာတာပဲသိတယ်.. မခံနိုင်ပါဘူး… အသက်ဘယ်က
“ ကျွန်တော့လီးကရော အနေတော်ဘဲလား စူဇီ… ဟင် ”
စူဇီက ဒေါက်တာမင်းဒင်၏ ပါးပြင်တဖက် အနမ်းပွင့်လေးဆက်သလိုက်သည်။
“ စူဇီတော့ယူ့ကိုအရမ်းချစ်သွားပြီကွယ် ”
“ ဒါနဲ့ စူဇီတို့ဘယ်တော့ ပြန်မှာလည်းဟင် ”
“ စူဇီယောက်ျားဆေးကုပြီးမှပြန်မှာ ”
“ စူဇီ ကလေးသိပ်လိုချင်တာပဲလား ”
“ ဟာ.. လိုချင်တာပေါ့ ဒေါက်တာရယ် ”
“ ဒါနဲ့များ…စူဇီရယ်အခြားကလေးတစ်ယောက်ယောက်မွေးစားလိုက်ရင်ပြီးတာပဲ ”
“ အဲလိုမဟုတ်ဘူး စူဇီကိုယ်တိုင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချင်တာ ပြီးတော့… မွေးကာစ ကလေး ငယ်ငယ်လေးကို
ပြုစုရတာမျိုးစူဇီ သိပ်သဘောကျတာ.. ”
“ ဒေါက်တာပဲစမ်းသပ်ပြီး သားအိမ်နဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းတွေကောင်းတယ်ဆို ”
“ ဒါပေမယ့်မျိုးဥပြွန်ကပျက်စီးသွားတော့စူဇီရဲ့ရင်သွေးကို ဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်ပါ့မလဲ ”
“ အို… ဒုက္ခပါပဲ ဒေါက်တာရယ် စူဇီကို မကူညီနိုင်တော့ဘူးလား… ဟင် ”
စူဇီ၏ ခံစားချက်ကို ဂရုဏာသက်သွားသော ဒေါက်တာမင်းဒင်က သူမ၏သူမ၏ နဖူးပေါ်မှဆံပင်လေးများကို
“ အဲ… တစ်ခုတော့ရှိတယ်… စူဇီကိုယ်ဝန်ဆောင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ … ကျနော်တို့
ဆေးပညာနဲ့ လုပ်လို့ရနိုင်လိမ့်မယ် ဒါပေမယ့်… ကလေးကစူဇီရဲ့ရင်သွေးမဟုတ်ဘူး၊ တခြားဆီက
စူဇီစိတ်ဝင်စားသွားသည်။ ဒေါက်တာမင်းဒင်၏ ရင်ခွင်တွင် ခေါင်းမှီထားရာမှ မော့လာပြီး…
“ ဘယ်လိုလဲဒေါက်တာ တခြားကသန္တေသားကို စူဇီရဲ့ဝမ်းထဲမှာလွယ်ပြီး မွေးထား နိုင်မယ်မဟုတ်လားဟင်…
“ ဟုတ်ပါတယ်စူဇီ… အဲဒီလိုမျိုးယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ဆေးရုံကမီးယပ် ပါရဂူဆရာဝန်ကြီး
ဒေါက်တာကောင်းဇံနဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်ပါအုံးမယ်… ”
“ ဒါဖြင့်လုပ်ပါဒေါက်တာ… စူဇီ ဘယ်သူ့ကလေးဖြစ်ဖြစ် ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးချင် တာပါပဲ… ”
ဒေါက်တာမင်းဒင်က စူဇီ့ကိုယ်လုံးကလေးကို ဖက်တွယ်ရာမှ ခွာလိုက်ရင်း…
“ အဲ… တစ်ခုတော့စဉ်းစားစရာပဲ… စူဇီမွေးဖို့ ဘယ်အမျိုးသမီးက သူ့ရဲ့ရင်သွေး ရတနာလေးကို
“ အို… ဖြစ်နိုင်ရင်လုပ်သာလုပ်ပါဒေါက်တာ၊ စူဇီငွေကုန်ချင်ကုန်ပါစေ ကလေး ချောချောလှလှလေး
ဒေါက်တာမင်းဒင်က လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားလိုက်သည်။ ဘယ်အမျိုးသမီးဆီက မျိုးဥကို ရနိုင်မလဲ
မျိုးဥပေးနိုင်မဲ့အမျိုးသမီးက ချောချောလှလှ ဖွံ့ဖွံ့ဖြိုးဖြိုး ဖြစ်အုံးမှ၊ သန္ဓေသားကလည်း ချောလှနိုင်လိမ့်မည်၊
အဖိုသန္ဓေပိုးကိုရော ဘယ်သူ့ဆီက ရနိုင်မည်နည်း၊ အဲ… ဟုတ်ပြီ စူဇီ့ယောက်ျားကိုယ်တိုင် အောင်မြင်စွာ Continue reading →
သူ့နာမည်က သဇင်။ကျွန်တော် ပထမဆုံး လိုးခဲ့ဖူးတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပေါ့။ သူက ကျွန်တော်၈ တန်း နှစ်တုန်းက သင်္ချာကျူရှင် ဆရာမလေ။ အဲဒီတုန်းက နေ့တစ်နေ့ကို ခုထိပြန်သတိရနေတုန်းပဲဗျာ။စနေနေ့တွေဆိုရင် မသဇင်ကကျွန်တော်ကို မနက် ၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီထိ လာသင်တယ်။ အဲဒီစနေနေ့ကတော့ အဖေနဲ့ အမေက အလှူတစ်ခုကိုသွားနေတော့ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး။ ကျွန်တော်လည်း မသဇင် မလာခင် ငှားထားတဲ့ သြကားကို Continue reading →
အခန်း (၃) – တည်းခိုခန်း
တည်းခိုခန်းအောက်ရောက်တော့ … “ရော့ … ၁၀၀၀၀”
ဦးက … တစ်ထောင်တန် ၁၃ ရွက်ကို … ပေးသည် … အေး သေချာ ရေလိုက်သည် …
“ပြည့််တယ် … ဦး” “သေချာသိမ်းထားဦး … ကျပျောက်သွားအုံးမယ်” “ဟုတ်”
ဒီလိုတော့လည်း မဆိုးပါဘူး … လေသံလေးက … အေးကို ဂရုဏာသက်တဲ့ လေသံမျိုး … ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်မယ့်ပုံစံပါပဲ … အေး ဂါဝန်ဘေးက အိတ်ထဲ သေချာထည့်လိုက်သည် … တည်းခိုခန်းရောက်တော့ … ကောင်တာက ကောင်လေးက …
“ဒီနေ့နောက်ကျတယ်နော်” “ဟုတ်ပ … ကားကြပ်နေလို့” “အစ်ကိုကြီး … အခန်းခက ၅၀၀၀” “အေး ရော့”
ခြင်္သေ့ ငါးကောင်ကို လျှောလျှော ရှူရှူပေးလိုက်ပြီး … အခန်းလေးထဲကို … အေး အမြန်ဝင်လိုက်သည် … ဦးက နောက်က ၀င်လာပြီး … တံခါးဂျက်ကို … သေချာ ပိတ်လိုက်သည် … ခုတင်က သိပ်မကြီး … အခန်းက ကျဉ်းသည် … အေး … ခုတင်ဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်နေဆဲ … ဦးကို ကြည့်နေမိသည် … ဦးက ခုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်သည် … “သမီးနာမည်က … အေး တစ်လုံးပဲလား” “ဟုတ်ကဲ့” “ဒီမှာ လာထိုင် … မတ်တပ်ကြီး ရပ်မနေနဲ့” “ဟုတ်”
လူကြီးက … အေးကို သမီးခေါ်ပြီး … သူ့ပေါင်ပေါ် ထိုင်ခိုင်းသည် … အေးလည်း ဘယ်ရမလဲ … သိမ့်ကနဲ ၀င်ထိုင်ပစ်လိုက်တာပေါ့ …
အိုး … သူ့ပေါင်တွေက … မာလိုက်တာ … တင်းနေတာပဲ … အသားတွေက … ဖိန်းကနဲ ရှိန်းကနဲ … ဖြစ်သွားသည် … အေးခါးလေးကို … သူ့ညာဘက်လက်နဲ့ ဖက်တယ် … ဘယ်လက်က ဘာလုပ်မလဲ … အေးကြည့််တယ် … သိတယ် … အေးရဲ့ ရင်သားကို … သူကိုင်တော့မယ် … မဟုတ် … လက်ကြီးက … ရင်သားနားပေါ် ရောက်ပြီးမှ မကိုင် … လက်ညှိုးလေးနဲ့ … ဖိသည် … ချေသည် … အို … အေးရဲ့ နို့သီးထိပ်လေးကို … ဘယ်လိုများ ခန့်မှန်းသလဲမသိ … တန်းကနဲပဲ … အေး တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် … ယားသည် … “အို … ယားတယ်ရှင့်” “ဟဲ … ဟဲ”
သဘောကျနေသည် … သူလုပ်လိုက်တာ မှန်သွားလို့လား မသိ … သဘောကျနေသည် … “ဦး … နေတော့မလားဟင်”
ပေါ်တင်ပဲ မေးလိုက်သည် … မြန်မြန်လုပ် … မြန်မြန်ပြီးချင်သည် …
“အင်္ကျီတွေ ချွတ်လေ” “ရှက်တယ် ဦးရယ်” “မရှက်ပါနဲ့ … သမီးကလည်း” “ဟင့်အင်း”
အေး … သိပ်မညုတတ်ပါ … ဘာလို့မှန်းမသိ … ဒီလူကြီးနဲ့ ကျမှ … ညုချင်နေသည် … ကလိချင်သည် … အေးကို … ခုတင်ပေါ် လှဲချလိုက်သည် … ဒီလို လှဲချလိုက်တော့ … အေး ရင်နှစ်မွှာက … ပိုပြီး မို့လာသည် … မောက်လာသည် … အေး ရင်သားနဲ့ သူ့မျက်နှာက သိပ်မဝေး … တစ်ထွာပေါ့ … လူကြီးက … အေး ရင်သားတွေကို ကြည့််ပြီး
“ထွားတယ်နော်” “ဟုတ် … သမီးတို့မျိုးရိုးက ထွားကို ထွားတာ” “လုပ်တာ ကြာပြီလား”
“မကြာသေးဘူး ဦးရဲ့ … ဒီနေ့ ကားကြပ်တာနဲ့ … နောက်ကျနေတာ … ပန်းဆိုးတန်းရောက်တော့ ဦးနဲ့ တွေ့တာပဲ”
ဦး … အေးရဲ့ … လည်တိုင်ကို … ဘာမပြော … ညာမပြောနဲ့ … ငုံ့နမ်းလိုက်သည် … အို … ယားသည် … သူ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေက … စူးသည် … အေး … ကြက်သီးလေးတွေ ထလာသည် … ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ … ဒီလူကြီးနဲ့ ကျမှ … တုနတုန်ယင်ယင် ဖြစ်နေသည် … လက်တွေက … အေးရဲ့ … ရင်သားကို … အုပ်ကိုင်လိုက်သည် … အို … သန်လိုက်တဲ့ လက် … စနယ်ပြီ … အေးရဲ့ ရင်သားတွေကို … တင်းနေအောင် ကိုင်သည် … ညှစ်သည် …
“အိုး … နာတယ် … နာတယ် … ဦး”
အေး … မျက်ရည်လေးတွေတောင် လည်လာသည် … ရင်သားဆိုတာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ … အနုဆုံး အသားစိုင်တွေ … ထွားတယ်ဆိုပေမယ့် … အိနေတယ် … အကြမ်းကိုင်ရင် နာတယ် … နာလို့ အော်ရင် … ဒင်းတို့က … သိပ်သဘောကျတာ … ဘာဖြစ်လို့ ယောက်ျားတွေက … သူများအသားနာတာကို … သဘောကျလဲ မသိ … အိုး … မတွေးချင် … ၀ဋ်ရှိတုန်းတော့ … ခံပေတော့ … သူ့ပိုက်ဆံယူပြီးမှတော့ … တန်ရာတန်ကြေး ပေးဆပ်ရမည် … အသွေးအသားကို ရောင်းစားတယ်ဆိုပေမယ့် … သူများပိုက်ဆံတော့ အလကား မလိုချင်ပါဘူး …
“ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ … ဦးရယ်”
အေး … တောင်းပန်ကြည့််သည် … သူ့ပုံစံက နည်းနည်း အားနာသွားတဲ့ ပုံ …
သိပ်လှတော့ … ညှစ်မိတာပေါ့ …
“ဖြေးဖြေးလုပ်နော် … ဦးက အရမ်းကြမ်းတယ်”
အေး … ဂါဝန်ကို ဆွဲမလိုက်သည် … တင်သားကို နည်းနည်းကြွပြီး … ခေါင်းကနေ ချွတ်လိုက်သည် … အတွင်းခံတွေ … တစ်ခုပြီးတော့ တစ်ခု ချွတ်ပစ်လိုက်သည် …
“ဦး … ချွတ်အုံးလေ … ခစ် … ခစ်”
အေး … ကူချွတ်ပေးလိုက်သည် … အခုတော့ … နှစ်ယောက်လုံး … ကိုယ်တုံးလုံး … ဟာ … ငါတော့ မှားပြီ … ဟိုလူကြီးက လူကြည့််တေတော့ ရိုးပုံရိုးလက်နဲ့ … သူ့ဟာကို ကြည့်ပါအုံး … ဂေါ်လီတွေနဲ့ … ထောင်နေလိုက်တာလဲ … ပြောင်းဖူးကြီးကျနေတာလဲ … အမေရေ … အေးတော့ သေပါပြီ …
“ဦး … ဖြေးဖြေးနော်”
“ဟွန့် … သူ့ဟာကြီးက အကြီးကြီး … ပြောင်းဖူးကျနေတာပဲ”
“ဟဲ … ဟဲ … အေး စွဲသွားအောင် … ဦးလုပ်ပေးမယ်”
အေး … ပေါင်ကားပေးလိုက်သည် … အေးပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှာ … ၀င်နေရာယူပြီး … သူ့ဒုတ်နဲ့ … အေးရဲ့ ဟာလေးကို အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် … ပွတ်ပစ်လိုက်သည် … အေး စိတ်မပါတော့ … သူ့ပစ္စည်းကြည့်ပြီး … ခုနက စိတ်ထချင်တာ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ … ဦးကတော့ ပွတ်သည် … တောင်ထိုးလိုက် … မြောက်ထိုးလိုက် … အေးရဲ့ ပန်းဖူးလေးကိုလည်း … လက်နဲ့ ဖိချေလိုက်သည် …
“အို … လက်ကြီးနဲ့ … ဟာ … ဟင့်”
အေး … ကော့ပျံသွားသည် … ရင်သားတွေကို ပိုကော့ပစ်လိုက်ပြီး … တင်သားတွေက … မွေ့ယာအောက်ကို ပိုခွက်ဝင်သွားသည် … ဦးကို ပိုပြီး … တင်းတင်းလေး ဖက်ထားမိသည် … ဦးက ဒီလိုလုပ်တာ သဘောကျတယ်ထင်ပါရဲ့ … ပိုပြီးတော့ ပွတ်သည် … ချေသည် … ပန်းဖူးလေးကို သေချာလုပ်နေသည် … ခံရခက်သည် … အရမ်းခံရခက်သည် … မီးပုံထဲ … ဓါတ်ဆီပုံး ပစ်ထည့်လိုက်သလို … စိတ်ထဲမှာ … ဟိုစိတ်တွေ … ၀ုန်းကနဲ ဆိုသလို … ထကြွလာသည် …
“အို … လုပ်ပါတော့ အစ်ကိုကြီးရယ် … အေး … မခံနိုင်တော့ဘူး”
“အား … ဖြေးဖြေး”
သူက … သူ့ဟာကို ကိုင်ပြီး … အေးထဲကို ဖြေးဖြေးထည့်သည် … မ၀င် … ဘယ်ဝင်မလဲ … ပြောင်းဖူးလောက်ဟာကြီးကို … ဘယ်လိုလုပ်ဝင်မှာလဲ … အေးဟာကို … နဲနဲ ဖြဲပေးလိုက်သည် … စွတ်ကနဲ ၀င်ချလာသည် … ဟိုး … သူ့ဟာ ထိပ်ပိုင်းလောက်ပဲ … အေးထဲ ၀င်လာရုံ ရှိသေးသည် … အေး နားထင်တွေ … ဆံပင်တွေ ထောင်ထလာသည် … ကြီးလိုက်တာ … မခံနိုင်ဘူး … ဟူး … အေး … ယောင်ယမ်းပြီး … သူ့ကို အတင်းတွန်းသည် … မရ … ဗလကတော်တော်တောင့်သည် … တစ်ထစ်ချင်း ၀င်လာသည် …
“အား … ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … အမေရေ …”
အေးရဲ့ဟာလေးက … လူတကာ လုပ်တာခံရတယ်ဆိုပေမယ့် … အဲဒီလောက် မကျယ်သေးပါဘူး … ငယ်သေးတာရယ် … ကျန်းမာသန်စွမ်းနေတာကြောင့်် … ကျဉ်းနေဆဲ … ကြပ်နေဆဲ … နာလွန်းလို့ အတင်းညှစ်ထားတာကို … သူက ဖီးတွေ့နေသည် … နောက်ဆုံးတစ်ချက် … အားကုန်ဆောင့်ဝင်လာသည် …
“အား … နာတယ် နာတယ် … သေပါပြီ”
အေး ယောင်ယမ်းပြီး … မွေ့ယာခင်းကို … ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားမိသည် … အေးတို့ဘ၀မှာ … မနှစ်သက်လည်း ခံ … နာလည်းခံ … အတင်းလုပ်လည်း ခံရတာပါပဲ … လူကြီးက … ဘယ်အချိန်ကထဲက … ငတ်နေလဲ ပြတ်နေလဲမသိ … ဆောင့််သည် … ဆောင့်တာမှ … တရစပ်ဆောင့် …
“အား … နာတယ် နာတယ် … ဦးရယ်”
“ဖြေး ဖြေး ဦးရယ်”
“အရမ်းကောင်းနေပြီ … အေးရယ်”
“အို … အား … လား လား”
“ထိတယ် … ထိတယ်”
“အဲလို မလုပ်နဲ့လေ … မခံနိုင်ဘူး”
အေး … တကယ်မခံနိုင်တော့တာပါ … ဂေါ်လီတွေရဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်တိုက်မှုက … အတွင်းသားနုနုတွေကို နာကျင်စေသည် … နာတာမှ … အသည်းခိုက်အောင်နာသည် … ယောက်ျားဆိုတာမျိုးက … အေးတို့ အဲဒီလိုမျိုး … ခံရခက်လေ … ပိုသဘောကျလေ … ဖီလင်လာလေပဲ … သူများအသားနာအောင် … သက်သက်ဂေါ်လီတွေထည့်ကြသည် … ဂေါ်လီဆိုတာက သဘာဝမဟုတ် … အေးရဲ့ ပန်းလေးထဲ … အထည့်ခံရတိုင်း … ဂေါ်လီတွေက ထောက်နေသည် … အ၀င်မချော … အတွင်းသားနံရံများကို … ပွတ်ဆွဲသွားတာများ … ကောင်းလှသည် … ဒါပေမယ့် နာသည် … ခံရခက်သည် … သူများအသားနာမှ … နှစ်သက်တဲ့ ယောက်ျားတွေကို မုန်းတယ် … ဘယ်ဘ၀က ၀ဋ်ကြွေးတွေလဲ မသိပါဘူး … ခံရတာမှ လိမ့်နေအောင် ခံရတာ … တရစ်ဆောင့်နေရင်းမှ … ထိုးမွှေပစ်လိုက်သည် … အေး … မွေ့ယာခင်းကို … ကျစ်ကျစ်ပါအောင်
ဆုပ်ပြီး … သူ ကြမ်းသမျှ ရမ်းသမျှ … အံကိုကြိတ် … နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ပြီး … အားတင်းထားရသည် …
“အို … တော်ပါတော့ရှင်” Continue reading →
အခန်း (၂) – ပန်းဆိုးတန်း
သိတယ်မှတ်လား … ပန်းဆိုးတန်း ဆိုတဲ့ နေရာကို … ရန်ကုန်မြို့လည်ကောင်က … ရုပ်ရှင်ရုံတွေ ရှိတဲ့နေရာလေ … ပန်းဆိုးတန်း ရောက်တော့ … လူတွေကို လျှောက်ကြည့်လိုက်သေးတယ် … မိစံရောက်ပြီ … ထမီကို ဆွဲဆန့်နေတယ် …ချယ်ရီ ပျောက်နေတယ် … အင်း … အလုပ်ဖြစ်နေကြပြီထင်ပါရဲ့ … ငါကော ဈေးဦး ဘယ်တော့ ပေါက်မှာလဲ မသိဘူး … ဟား ဟား … စိတ်မပူပေါင် … အချိန်တန် … ပြည့်သွားလိမ့်မယ် … မယုံမရှိနဲ့နော် … တစ်နေ့ … လေးသောင်းလောက်တော့ … အေး … ရှာနိုင်ပါတယ် … လမ်းကြောင်းရှိတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့ … ငိုချင်တယ် … တစ်ပြားမှ မရဘူး … အေး အလုပ်က … ယောက်ျားတွေကို … ဖျော်ဖြေသူပေါ့ … ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောရင် … “ပြည့်တန်ဆာ” … ရိုင်းရိုင်း ပြောရင် “ဖာ” ပေါ့ … အေးနဲ့ တစ်ခါနေရင် … ငါးထောင်ပေးရတယ် … နှစ်ထောင်က … မသောင်းကို ပေးရတယ် … မသောင်း ဆိုတာက ပန်းဆိုးတန်းက ခေါင်းပေါ့ … အေးကို … ဒီလိုင်းထဲရောက်အောင် … ခေါ်လာတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ပေါ့ … ကျေးဇူးရှင်ဆိုလို့ ရွဲ့ပြီးပြောတာ … မဟုတ်ဘူးနော် … အေး စိတ်ထဲကကို ကျေးဇူးရှင်လို့ သတ်မှတ်ထားတာ … မသောင်းက … သဘောကောင်းပါတယ် … သူများတွေလို အတင်းမြှူဆွယ်ပြီး … ခေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး … ဒီအလုပ်လုပ်ရင် … ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ် … သေချာရှင်းပြပါတယ် … သေချာစဉ်းစား … ပြန်လှည့်လို့မရဘူး … အေးလည်းသိပါတယ် … မတတ်နိုင်ဘူးလေ … ငွေလိုနေတာကိုး … အရင်းအနှီးမရှိ … ပညာမတတ်တော့ … လူကို ရင်းရတာပေါ့ … မသောင်း ကို သူများတွေက … အဒေါ်လို့ခေါ်ကြတယ် … အေးကတော့ … အမေလို့ ခေါ်တယ် … သူက အေးအပေါ်ကောင်းပါတယ် … လူတွေကို ကြည့်ပြီးမှ … အေးကို လိုက်သွားခိုင်းတယ် … ဘာကြေးညာကြေး ဆိုလည်း … အကုန် သူက ဒိုင်ခံရှင်းပေးပါတယ် … နေ့ခင်း ထမင်းစားရင် … သူက အေးအတွက် တချိုင့်ယူလာပေးပါတယ် … သူစားတဲ့ဟင်းထဲက ခွဲပေးတယ် … ဟင်းတော့ သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့ … ဒါပေမယ့် … အေး စားနိုင်ပါတယ် … အေး … ပန်းဆိုးတန်း ရောက်တာနဲ့ … အမေသောင်းကို လိုက်ရှာတယ် … သူက တံတားအောက်မှာ ထိုင်နေကျ …“အေး … လာပြီဟေ့”“ဟုတ် … အမေ”“ဟိုနှစ်ယောက်တော့ ဈေးဦးပေါက်သွားပြီ … ညည်းက ဘာလို့ နောက်ကျနေတာလဲ”“ဟဲ ဟဲ”
“ကားပေါ်မှာ နောင်ဂျိန်ချလာလို့”“ဟယ် … ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ”“ကားပေါ်မှာ … နောက်ကနေ … နှာဘူးကောင်လေ … အတင်းလုပ်လို့ … အေး ပညာပေးလိုက်တယ်”
“ဟုတ်လား … ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ … သမီးရယ်”“အပ်နဲ့ ထိုးလိုက်တာ”“အပ်နဲ့ ထိုးလိုက်တာ”
“အင်း … ဟား ဟား ဟား … အမေသိလား … အော်လိုက်တာ … နားကွဲမတတ်ပဲ”
“အေးကတော့ လုပ်ပြီ … အခု … အူမြူးနေတယ်ပေါ့လေ”
“ဟုတ်တယ် … သမီး အူမြူးနေတယ်” Continue reading →